Fomba Fandikana Amin’ny Fiteny 750 Mahery
“Misy milaza fa ny mandika teny no asa sarotra indrindra.” —“Ny Rakipahalalan’i Cambridge Momba ny Fiteny” (anglisy).
MIAINGA avy any amin’ny Sampan-draharahan’ny Fanoratana any amin’ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any New York, Etazonia, ny lahatsoratra hadika. Ireto avy ny dingana arahiny: Dinihina tsara aloha hoe inona no lahatsoratra havoaka, karohina izay fanazavana hatao ao, izay vao soratana ilay izy. Hamarinina ilay fanazavana avy eo, ary jerena raha mety tsara sy tsy tranainy be ny teny ampiasaina. *
Alefan’ilay sampan-draharaha any amin’ireo ekipa mpandika teny an-jatony eran-tany ilay lahatsoratra aorian’izay. Amin’ny alalan’ny Internet no anaovany an’izany. Mipetraka sy miasa any amin’ireo toerana ampiasana an’ilay fiteny andikany ny ankamaroan’ny mpandika teny. Maro amin’izy ireo koa no mandika amin’ny fitenin-drazany. Tsy maintsy mahay tsara ny fiteniny àry izy ireo sady mahazo tsara ny teny anglisy.
Aseho an-tsary eto ny fomba andikana ny Mifohaza! amin’ny teny espaniola
Voarain’ny ekipa mpandika teny any Espaina ny lahatsoratra amin’ny teny anglisy avy any amin’ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any Etazonia
Mamakafaka an’ilay lahatsoratra ny olona tsirairay ao amin’ny ekipa
Miara-mandinika an’ilay lahatsoratra amin’ny teny anglisy ny ekipa, alohan’ny handikana azy io
Hamarinin’ny mpandika teny raha voadika tsara ny teny anglisy. Ataony azo antoka koa hoe mazava sy manaraka fitsipi-pitenenana ilay lahatsoratra voadika
Alefa any amin’ny sampana samihafa ilay asa rehefa vita tanteraka mba hatao pirinty sy ho azo zaraina
Mandray soa ny mpamaky eran-tany satria voadika amin’ny fiteniny ny torohevitra mahasoa avy ao amin’ny Baiboly
Ahoana no ataon’ny mpandika teny rehefa mandika lahatsoratra?
Hoy i Geraint, mpandika teny any Grande-Bretagne: “Mpandika teny vitsivitsy izahay no ao anatin’ny ekipa iray, ka mila mahay miara-miasa. Mifanampy izahay rehefa misy teny sarotra. Tsy ny teny tsirairay ihany no dinihinay amin’izany, fa fitambaran-teny koa. Fantarinay tsara ny tena dikan’ilay izy, nefa koa eritreretinay foana hoe iza no karazan’olona hamaky an’ilay lahatsoratra.”
Inona no tanjonareo rehefa mandika teny?
“Tianay ny mpamaky raha mieritreritra hoe hoatran’ny nosoratana tamin’ny fitenin-drazany ilay lahatsoratra, fa tsy hita hoe nadika. Mampiasa fitenin’olona andavanandro izahay noho izany. Amin’izay ny mpamaky mba hankafy an’ilay lahatsoratra. Hoatran’ireny mihinana sakafo matsiro ireny e!”
Inona no mahatsara an’ilay hoe mipetraka any amin’ny toerana ampiasana an’ilay fiteny?
“Maheno olona mampiasa an’ilay fiteny izahay isan’andro. Mora azon’ny olona eo an-toerana ny zavatra adikanay, satria mifanerasera amin’izy ireo izahay. Azonay anontaniana azy ireo koa raha fampiasan’ny olona andavanandro ny teny ampiasainay, sady mora azo sy manintona. Manampy anay hampita tsara ny hevitry ny teny anglisy izany.”
Inona avy ny dingana arahina rehefa mandika teny?
“Omena zavatra hadika ny ekipa tsirairay. Samy mamaky an’ilay lahatsoratra amin’ny teny anglisy aloha izahay mba ho azonay tsara ilay izy. Jerenay koa ny firafitry ny lahatsoratra ary fantarinay hoe natao ho an’iza ilay izy. Eritreretinay hoe: ‘Inona no antony nanoratana an’ilay lahatsoratra? Inona no loha hevitra ao anatiny? Inona no hianaran’ny olona avy amin’izy io?’ Ilainay izany fanazavana izany rehefa tena mandika izahay.
“Mifanakalo hevitra izahay avy eo. Ataonay azo antoka hoe azonay tsara ilay lahatsoratra amin’ny teny anglisy. Iezahanay avoaka koa ilay fomba fanoratra ao amin’izy io. Amin’izay rehefa mamaky an’ilay lahatsoratra nadika ny mpamaky, dia mitovy amin’izay tsapan’ny mpamaky anglisy ihany ny tsapan’izy ireo.”
Ahoana ny fomba fiasanareo?
“Vakinay imbetsaka ny fehintsoratra voadika, mba ho azon’ny mpamaky avy hatrany ilay lahatsoratra.
“Mandika an’ilay fehintsoratra ny mpandika teny iray, ary samy mahita an’ilay izy ao amin’ny efijeriny ny hafa. Hamarininay hoe tsy misy hevitra latsaka na nampiana. Jerenay koa raha mora azo ilay izy, tsy misy diso tsipelina, ary manaraka fitsipi-pitenenana. Avy eo misy anankiray mamaky mafy an’ilay fehintsoratra. Raha vao tsy misosa tsara ny vakiteniny, dia jerena ny antony nahatonga an’izay. Averin’ny iray aminay vakina indray ilay lahatsoratra manontolo rehefa voadika. Ny hafa kosa manamarika an’izay tokony hahitsy.”
Hoatran’ny asa be izy izany a!
“Ie! Vizana izahay rehefa hariva ny andro. Ny ampitso indray àry vao averinay jerena ilay lahatsoratra, satria mba efa avy niala sasatra. Mandefa fanitsiana farany amin’ilay lahatsoratra amin’ny teny anglisy ny Sampan-draharahan’ny Fanoratana, rehefa afaka herinandro vitsivitsy. Vakinay indray àry ilay lahatsoratra, dia hamarininay farany.”
Inona ny programa ampiasainareo?
“Mbola tsy mahasolo mpandika teny aloha ny ordinatera hatreto. Fa namorona programa manamora an’ilay asa ny Vavolombelon’i Jehovah. Anisan’izany ny rakibolana iray. Ampidirina ao amin’izy io izay teny na fitambaran-teny fampiasa. Misy programa hafa indray ahafahana mikaroka an’izay zavatra efa voadika. Azo jerena ao hoe ahoana no efa nandikana ny teny sarotra sasany.”
Ahoana no fahitanareo ny asanareo?
“Hoatran’ny hoe manao fanomezana ho an’ny olona izahay rehefa mandika teny. Miezaka hanome zavatra tsara izahay mba hahasoa azy ireo. Faly izahay mieritreritra hoe mety hanohina ny fon’izy ireo ny lahatsoratra ao anaty gazety na amin’ny Internet, ary mety hanatsara ny fiainany.”
Mahasoa foana ireo zavatra voadika
Olona an-jatony tapitrisa, eran-tany, no mandray soa avy amin’ireo zavatra vokarin’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ny fiteniny. Avy ao amin’ny Baiboly ny torohevitra mahasoa hita ao amin’ny tranonkala jw.org sy ao amin’ireo boky sy video avoakanay. Efa nilaza koa Andriamanitra, izay antsoina hoe Jehovah, fa tiany hahalala ny hafatra ao amin’io boky masina io ny ‘firenena sy foko ary olona samy hafa fiteny.’—Apokalypsy 14:6. *
^ feh. 4 Soratana amin’ny teny anglisy ny lahatsoratra hadika.
^ feh. 25 Midira ao amin’ny www.jw.org/mg raha tianao ny hahita boky, gazety, video, ary hihaino raki-peo amin’ny fiteninao sy amin’ny fiteny hafa an-jatony.
Amin’ny fiteny 750 mahery
Bokikely avoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah
Amin’ny fiteny 640 mahery
Gazety avoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah
Amin’ny fiteny 250 mahery
Amin’ny fiteny 100 mahery
‘Tsy salama aho ary efa mitsabo tena. Mahasoa ahy koa anefa ny fanazavana ao amin’ny Mifohaza! Lasa mahay mifehy ny hatezerako aho izao noho io gazety io. Resahin’izy io koa hoe ilaina ny mihinana sakafo mahasalama sy manao fanatanjahan-tena. * Nampihariko ny toroheviny, dia lasa mihasalama aho.’—Ranaivoarisoa, Madagasikara.
“Mampiasa Mifohaza! amin’ny teny goujrati ny dokoterako rehefa mampianatra momba ny fahasalamana. Niresaka momba ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fibobohan-toaka izy, tao amin’ny sekoly iray. Nilaza ny mpianatra tao, herinandro vitsivitsy tatỳ aoriana, fa tsy dia nandany vola tamin’ny toaka intsony ny dadany noho ilay fanazavana tao amin’ny Mifohaza! Naleony nividy zavatra ho an’ny zanany.”—Janet, Inde.
^ feh. 52 Tsy mampirisika ny olona hanaraka fitsaboana na hihinana sakafo manokana ny Mifohaza! Ny tsirairay no tokony handinika tsara rehefa hifidy izay sakafo hohaniny sy izay fanatanjahan-tena hataony.
Nanoratra tamin’ny Mifohaza! ny vehivavy iray any Angola. Hoy izy: “Very ny pensilihazon’ilay zanako lahy valo taona, dia nalainy ny an’ny mpiara-mianatra taminy. Nojerenay tamin’ny teny portogey ilay video ao amin’ny jw.org hoe Ratsy ny Mangalatra. Niaiky ny hadisoany izy avy eo. Te hifona amin’ny mpiara-mianatra aminy izy sady hilaza ny antony namerenany an’ireo pensilihazo, ka nasainy hiaraka taminy tany am-pianarany aho mba hanatrika an’izany. Navelan’ny mpampianatra hampiseho an’ilay video tamin’ny iray kilasy koa izahay. Tapa-kevitra ny tsy hangalatra intsony ny mpianatra sasany rehefa avy nijery azy io.”
Programa Fianarana Fiteny
Namoaka ny JW Language ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 2014. Programa azo alaina maimaim-poana ao amin’ny Internet izy io, ary natao hanampiana an’ireo mampianatra Baiboly amin’ny fiteny vahiny, toy ny teny alemà, anglisy, bengali, espaniola, frantsay, hindi, indonezianina, italianina, japoney, koreanina, myama, portogey, rosianina, sinoa, swahili, tagalog, tailandey, ary tiorka.
Hizara Hizara Nahoana ny Fiteny no Tsy Vato Misakana Intsony?
Ny Asa Fandikan-teny any Meksika sy Amerika Afovoany